ဖီဖီကွီးဒေါပှပွီလေ 😅😅😅အောကျခွေ စဈသား တှရေဲ့ အသကျထကျ သူ့သားလေးပိုငျဆိုငျတာကိုထိလို့ အစှမျးကုနျ ယုတျမာ သတျဖွတျပွပါတော့မညျ
Mytel တိုငျတှေ ဗုံးခှဲခံရတော့ဒေါသတကွီး နဲ့ မိုငျတဲက သကျမဲ့တှသေတ်တိရှိရငျ ငါတို့ စဈတပျကို လာတိုကျတဲ့လားငါတို့ ပွညျသူတှရေဲ့ ခြှေးနှဲစာ နဲ့ဝယျထားတဲ့လမျး‌ဘေးမှာ သူ့ဘာသာသူ ရပျထားတဲ့ကားတှေ အိမျတှေ ဖကျြဆီးခံရတုနျးကဘာစောကျသံမှ မထှကျခဲ့ဘူးနျော 😡😡😡 တာဝါတိုငျ အာမခံကုမ်ပဏီ က သာကွီးဩရသဟာနျော.
တဈတိုငျပကျြရငျ သိနျး ၃၀၀၀ လြျောကွေးပေးရမှာနျော..တိုငျပေါငျးက ၂၂၀၀ ကြျောရှိတယျ .. ထပျမလုပျကွပါနဲ့တော့နျော.ခုတောငျ တိုငျပေါငျး ၈၄ တိုငျ x သိနျး ၃၀၀၀= 252000 သိနျးလြှျောကွေးပေးရတော့မယျ..ဒါကွောငျ့ဖီဖီ ဒီမနကျ တပျမတျောသားတှေ သတောထကျပို..စိတျဆိုးသှားတာပေါ့ 😁😁
အမြားကွီးကနျြသေးတာတှထေပျမလုပျကွပါနဲ့တော့ လုံးဝ မလုပျကွနဲ့တော့😝😝😝ဖီဖီ ကွီး တအားကိုဒေါသထှကျနပွေီ
ဖီဖီကြီးဒေါပွပြီလေ 😅😅😅အောက်ခြေ စစ်သား တွေရဲ့ အသက်ထက် သူ့သားလေးပိုင်ဆိုင်တာကိုထိလို့ အစွမ်းကုန် ယုတ်မာ သတ်ဖြတ်ပြပါတော့မည်
Mytel တိုင်တွေ ဗုံးခွဲခံရတော့ဒေါသတကြီး နဲ့ မိုင်တဲက သက်မဲ့တွေသတ္တိရှိရင် ငါတို့ စစ်တပ်ကို လာတိုက်တဲ့လားငါတို့ ပြည်သူတွေရဲ့ ချွေးနှဲစာ နဲ့ဝယ်ထားတဲ့လမ်း‌ဘေးမှာ သူ့ဘာသာသူ ရပ်ထားတဲ့ကားတွေ အိမ်တွေ ဖျက်ဆီးခံရတုန်းကဘာစောက်သံမှ မထွက်ခဲ့ဘူးနော် 😡😡😡 တာဝါတိုင် အာမခံကုမ္ပဏီ က သာကြီးဩရသဟာနော်.
တစ်တိုင်ပျက်ရင် သိန်း ၃၀၀၀ လျော်ကြေးပေးရမှာနော်..တိုင်ပေါင်းက ၂၂၀၀ ကျော်ရှိတယ် .. ထပ်မလုပ်ကြပါနဲ့တော့နော်.ခုတောင် တိုင်ပေါင်း ၈၄ တိုင် x သိန်း ၃၀၀၀= 252000 သိန်းလျှော်ကြေးပေးရတော့မယ်..ဒါကြောင့်ဖီဖီ ဒီမနက် တပ်မတော်သားတွေ သေတာထက်ပို..စိတ်ဆိုးသွားတာပေါ့ 😁😁
အများကြီးကျန်သေးတာတွေထပ်မလုပ်ကြပါနဲ့တော့ လုံးဝ မလုပ်ကြနဲ့တော့😝😝😝ဖီဖီ ကြီး တအားကိုဒေါသထွက်နေပြီ
ဖီဖီကြီးဒျေါပပြီလေ 😅😅😅အောက်ခြေ စစ်သား တြေရဲ့ အသက္ထက် သူ့သားလေးပိုင္ဆိုင္တာကိုထိလို့ အျစမ်းကုန် ယုတ္မာ သတ်ဖတ်ပပါတော့မည်
Mytel တိုင်တြေ ဗုံျးခဲခံရေတာ့ဒေါသတကြီး နဲ့ မိုင္တဲက သက္မဲ့တြေသတ္တိရြိရင် ငါတို့ စစ္တပ္ကို လာတိုက္တဲ့လားငါတို့်ပည်သူတြေရဲ့ ချေးနြဲစာ နဲ့ဝယ္ထားတဲ့လမ်း‌ဘေးမြာ သူ့ဘာသာသူ ရပ္ထားတဲ့ကားတြေ အိမ်တြေ ဖ္က္ဆီးခံရတုန်းကဘာစောက်သံမြ မထြက္ခဲ့ဘူးနော် 😡😡😡 တာဝါတိုင် အာမခံကုမ္ပဏီ က သာကြီးဩရသဟာနော်.
တစ္တိုင္ပ္က်ရင် သိန်း ၃၀၀၀ လေ်ာ်ကြေးပေးရမြာနော်..တိုင်ပေါင်းက ၂၂၀၀ ကေ်ာ်ရြိတယ် .. ထပ္မလုပ်ကြပါနဲ့တော့နော်.ခုတောင် တိုင်ပေါင်း ၈၄ တိုင် x သိန်း ၃၀၀၀= 252000 သိန်းလျြော်ကြေးပေးရေတာ့မယ်..ဒါကြောင့္ဖီဖီ ဒီမနက် တေပ္မတ်ာသားတြေ သေတာထက္ပို..စိတ္ဆိုးသြားတာပေါ့ 😁😁
အမ်ားကြီးက်န်သေးတာတြေထပ္မလုပ်ကြပါနဲ့တော့ လုံးဝ မလုပ်ကြနဲ့တော့😝😝😝ဖီဖီ ကြီး တအားကိုဒေါသထြက်နေပြီ
ဖီဖီကြီးဒေါ်ပပြီလေ 😅😅😅အောက်ခြေ စစ်သား တြေရဲ့ အသက္ထက် သူ့သားလေးပိုင္ဆိုင္တာကိုထိလို့ အ္စမ်းကုန် ယုတ္မာ သတ်္ဖတ်္ပပါတော့မည်
Mytel တိုင်တြေ ဗုံး္ခဲခံရေတာ့ဒေါသတကြီး နဲ့ မိုင္တဲက သက္မဲ့တြေသတ္တိရြိရင် ငါတို့ စစ္တပ္ကို လာတိုက္တဲ့လားငါတို့္ပည်သူတြေရဲ့္ခေ်းန်ဲစာ နဲ့ဝယ္ထားတဲ့လမ်း‌ဘေ်းမာ သူ့ဘာသာသူ ရပ္ထားတဲ့ကားတြေ အိမ်တြေ ဖ္က္ဆီးခံရတုန်းကဘာစောက်သံမြ မထြက္ခဲ့ဘူးနော် 😡😡😡 တာဝါတိုင် အာမခံကုမ္ပဏီ က သာကြီးဩရသဟာနော်.
တစ္တိုင္ပ္က်ရင် သိန်း ၃၀၀၀ လေ်ာ်ကြေးပေးရ်မာနော်..တိုင်ပေါင်းက ၂၂၀၀ ကေ်ာ်ရြိတယ် .. ထပ္မလုပ်ကြပါနဲ့တော့နော်.ခုတောင် တိုင်ပေါင်း ၈၄ တိုင် x သိန်း ၃၀၀၀= 252000 သိန်းလြော်ကြေးပေးရေတာ့မယ်..ဒါကြောင့္ဖီဖီ ဒီမနက် တေပ္မတ်ာသားတြေ သေတာထက္ပို..စိတ္ဆိုးသြားတာပေါ့ 😁😁